सेकेनहेन्ड गाडी किन्दा यी ५ गल्तिले गइएला जेल
आर्थिक सेकेनहेन्ड गाडी किन्दा यी ५ गल्तिले गइएला जेल
यो सूचना तपाईलाई काम लाग्न सक्छ यदी तपाई सेकेन्हेन्ड गाडी किन्ने योजनामा हुनुहुन्छ भने| सेकेन्हेन्ड गाडी किन्दा यी कुरा ध्यान दिनुहोस्, सेकेन्डहेन्ड गाडी किन्दा गरेको गल्तिले तपाईलाई जेल समेत हुनसक्छ।
पहिले आफ्नो बजेट कति छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ। गाडीका लागि छुट्याएको बजेटमा हामीले बजारमा कुनै कम्पनीको नयाँ गाडी छ की छैन भन्ने अध्यन गर्नुहोस्।
यदि हामीले छुट्याइएको बजेटमा कुनै कम्पनीको नयाँ गाडी आउन सक्छ भने पुरानो भन्दा नयाँ गाडी किन्नुमा बुद्धिमानी हुनसक्छ। । त्यसैले हामीले छुट्याएको बजेटमा बजारमा कुनै नयाँ कार आएको छ कि भनेर बुभ्न सकिन्छ।
किन भने नयाँ सामान किन्नुका फाइदा धेरै हुनसक्छ्।
कहाँ गएर किन्ने
सेकेन्डहेन्ड गाडी किन्न जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईको लागि मारुति ‘ट्रिउ भ्याल्य’ू, ‘महिन्द्रा च्वाइस’, ‘ड्रोम’ जस्ता ब्रान्डहरु राम्रो बिकल्प हुनसक्छन्।
यि ब्रान्डहरुले सेकेन्डहेन्ड गाडीको आधिकारिक बिक्री बितरण गर्ने गर्छन्। यहाँ हामीलाई आफ्नो बजेट अनुसारको सर्टिफाइड गाडी पाउन सक्नुहुन्छ।
यो गाडीहरुमा फ्रि सर्भिसिङ पनि पाउन सकिन्छ। त्यसैले नचिनेको डिलरबाट सेकेन्डहेन्ड गाडी किन्नु भन्दा सेकेन्डहेन्ड गाडीकै ब्यपसाय गर्ने यी कम्पनीबाट गाडी किन्दा कन्डीसनबारे सही जानकारी पाउन सक्छौँ।
सामान्यतया सेकेन्हेन्ड गाडी किन्दा वारेन्टी दिँइदैन्। तर यहाँ पुरानो गाडीमा पनि बिभिन्न किसिमका वारेन्टीहरु पाउन सकिन्छ।
उदाहरणका लागि ‘मारुति ट्रिउ भ्याल्यू’मा गाडी किन्दा १ वर्षको वारेन्टी र ३ ओटा सर्बिसिङ फ्रि रहेको छ।
यहाँ सबै गाडी सर्टिफाइड हुने र नयाँ गाडी किन्ने बेला जसरी नै कागज बनाएर प्रकृया पूरा गरिन्छ। सेकेन्डहेन्ड गाडी बेच्नुभन्दा पहिला यहाँ जाँच गरिने कम्पनीको भनाइ छ। मारुति ट्रिउ भ्याल्यूमा ४ सय बढी सर्टिफाइड गाडी छन्।
यदि हामी कुनै ब्यक्तिबाट सेकेनहेन्ड गाडी किनिरहेका छौँ भने हामीलाई त्यसको कन्डिसन थाहा हुँदैन्। त्यसका लागि कुनै मेकानिकलाई लगेर गाडिको जाँच गराउन सकिन्छ।
सेकेन्डहेन्ड गाडी किन्दा हामीले गाडीको बारेमा गलत जानकारी पाउने संंभावना बढी हुन्छ।
गाडी धनीको पृष्ठभूमि
गाडी किन्नु भन्दा पहिला गाडी र गाडीको मालिकको बारेमा जानकारी राख्नु बुद्धिमानी हुन्छ। तपाईले किन्नलागेको गाडीबाट कुनै दुर्घटना भएको छ की छैन?
तपाईले किन्दै गरेको गाडीबाट कुनै गैरकानुनी काम त भएको छैन्? गाडी धनीमाथि कुनै किसिमको केश त परेको छैन? यी कुरा बुझ्नु जरुरी हुन्छ।
कहिले काँही हामी सस्तो मूल्यमा गाडी पाउँदा बिना सोच बिचार गाडी किन्न सक्छौँ | यस्तोमा हामीलाई पुलिस स्टेसन धाउनुपर्ने हुनसक्छ | आफू निर्दोश भएको प्रमाण पुर्याउन नसके जेल समेत जानुपर्ने हुनसक्छ।
पूर्ण बिश्वास छ भने मात्र सेकेन्डहेन्ड गाडी तब मात्र किन्नुस् | हामी फस्न पनि सक्छौँ यदी हामीले नयाँ मान्छेबाट गाडी किन्यौँ भने |